ဤစာရွက်စာတမ်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်သဘောတူစာချုပ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီကောက်ခံရန်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်သည်။
1.1.1 ။ အများပြည်သူကမ်းလှမ်းမှု / ကမ်းလှမ်းချက် - လိပ်စာရှိအင်တာနက်ရှိအင်တာနက်အရင်းအမြစ် (ဝက်ဘ်ဆိုက်) တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပူးတွဲဖိုင်များ (ဖြည့်စွက်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများ) ပါသည့်ဤစာရွက်စာတမ်းပါအကြောင်းအရာ - https://floristum.ru/info/agreement/.
1.1.2 ။ ကုန်ပစ္စည်းများ - ပန်းချီကားများ၊ ပန်းတစ်ပွင့်၏ပန်းများ၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကဒ်ပြားများ၊ ကစားစရာများ၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်များ၊ ရောင်းချသူမှ ၀ ယ်သူအားသူကမ်းလှမ်းသောအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
1.1.3 ။ အပေးအယူ - ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံးပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ (ပစ္စည်းများကို) ဝယ်ယူရန်စာချုပ်။ အရောင်းအ ၀ ယ်၏နိဂုံးနှင့်ယင်းကိုကွပ်ကဲခြင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသဘောတူညီချက်၏အများပြည်သူကမ်းလှမ်းချက်ကဆုံးဖြတ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သည်။
1.1.4 ။ ဝယ်သူ - ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းများအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး / အသုံးပြုသူ။
1.1.5 ။ ရောင်းသူ - အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူ၏တရားဝင်အနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအောက်ပါတို့မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
က) ၀ ယ်သူသည်နိဂုံးချုပ်သဘောတူစာချုပ်အရတရား ၀ င်တရား ၀ င်ဖြစ်ပြီးဘဏ်မှလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်အမိန့်ပေးသည် - FLN LLC;
(ခ) အခြားကိစ္စရပ်များတွင် - ၀ ယ်ယူသူများကိုရှာဖွေရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆင့်ကို“ စတိုး” အဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ အသုံးပြုသည်၊ အသုံးပြုလိုသည် (သို့) ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူ / အသုံးပြုသူတစ် ဦး / အသုံးပြုသူတစ် ဦး သဘောတူညီချက် / အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ ယ်သူများနှင့်လက်မှတ်ထိုး (နိဂုံးချုပ်) နှင့်သဘောတူညီချက် / အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်ငွေပေးချေမှုအတွက်လက်ခံခြင်း။
1.1.6 ။ အကျိုးဆောင် - FLN LLC ။
1.1.7 ။ အမှာစာ အလားအလာဝယ်သူ- အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အားလုံး၊ ၀ ယ်သူအတွက်ထုတ်ပေးသောကုန်ပစ္စည်း (ထုတ်ကုန်အုပ်စု) ကို ၀ ယ်ရန်အမိန့်၊ ရောင်းသူမှပေးသောယေဘုယျအမျိုးအစားမှကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အထူးပုံစံ
1.1.8 ။ ကမ်းလှမ်းချက်လက်ခံမှု - ဤရောင်းသူမှထင်ဟပ်ပြသထားသောရောင်းသူမှလုပ်ဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုများမှပြန်လည်ကုန်ကျမည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူအကြားသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ် (လက်မှတ်ထိုးခြင်း) ကိုဆိုလိုသည်။
1.1.9 ။ ဝဘ်ဆိုက် / ဆိုက် - သတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော system သည် https://floristum.ru လိပ်စာရှိအထွေထွေအင်တာနက်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်
1.1.10 ။ ဝန်ဆောင်မှု - ဆိုက်နှင့်၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက် / ပါဝင်မှုများကိုပေါင်းစပ်ပြီးပလက်ဖောင်းအား အသုံးပြု၍ ရရှိနိုင်စေသည်။
1.1.11 ။ ပလက်ဖောင်း Agent ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတို့ကိုဆိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားတယ်။
1.1.12 ။ ပုဂ္ဂလိကရုံး ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာမျက်နှာ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ အမှာစာများထားခြင်း၊ ပြီးစီးသည့်အမှာစာများတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အသိပေးချက်များကိုအသိပေးခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
၁.၂ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်တွင်၊ စာပိုဒ် ၁.၁ တွင်မဖော်ပြထားသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်၏။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်စာသားများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စာသားတွင်သက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စာသား၏တင်ပြချက်အားလမ်းညွှန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအယူအဆတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁.၃ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်မှချိတ်ဆက်မှုအားလုံးသည်အပိုဒ်ခွဲ၊ ပြဌာန်းချက်သို့မဟုတ်အပိုင်းသို့နှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏အခြေအနေများသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောချိတ်ဆက်မှုကိုဆိုလိုသည်၊
ငွေသွင်းငွေထုတ်၏ 2. ဘာသာရပ်
၂.၁ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူအားလွှဲပြောင်းရန်နှင့် ၀ ယ်သူကထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်များနှင့်အညီဆက်စပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်လိုအပ်ပါက ၀ ယ်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်လက်ခံရန်နှင့်ငွေပေးချေရန်ကတိပြုသည်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ။
၂.၂ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အမည်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရေအတွက်၊ လိပ်စာနှင့်ပေးပို့မည့်အချိန်နှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှု၏အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေများကို ၀ ယ်သူကသတ်မှတ်သည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
၂.၃ ။ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ("မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများ") ဖြင့်တည်ထောင်ထားသောနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကြားသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ်ရသည့်အဓိကကျသောအချက်မှာခြွင်းချက်မရှိလက်ခံခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူကလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်သဘောတူညီချက်အောက်ရှိပါ ၀ င်သူများ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
2.3.1 ။ အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်တင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင် https://floristum.ru/info/agreement/ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များ (အခြေအနေများ) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အခြေအနေများပါ ၀ င်သည်။
2.3.2 ။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင် https://floristum.ru/info/privacy/ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည်။
၂.၄ အပိုဒ် ၂.၃ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီကမ်းလှမ်းမှု၏, ပါတီများအပေါ် binding စာရွက်စာတမ်းများဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အညီနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ပါတီများအကြားကောက်ချက်ချသဘောတူညီချက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃.၁.၁ ။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသို့လွှဲပြောင်းခြင်း၏နိဂုံးတွင်ဆုံးဖြတ်သည့်ပုံစံနှင့်အခြေအနေတွင်လွှဲပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်သည်။
၃.၁.၂ ။ ရောင်းသူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူအား ၀ ယ်ယူရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၃.၁.၃ ။ ရောင်းချသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကုန်စည်များပေးပို့ရန်စီစဉ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၃.၁.၄ ။ ရောင်းချသူသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်ဤကမ်းလှမ်းချက်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, သဘောတူစာချုပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် (သတင်းအချက်အလက်) ကိုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃.၁.၅ ။ ရောင်းသူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပြဌာန်းထားသောအခြားတာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃.၂.၁ ။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ် (Transaction (Agreement)) မှသတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်အညီတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၂.၂ ။ ရောင်းသူသည်ဝယ်သူနှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်သဘောတူရန်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၂.၂.၁ ။ ၀ ယ်သူသည်တစ်နှစ်အတွင်းသင့်လျော်သောအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို (၂) ကြိမ်ထက်ပိုပြီးငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
၃.၂.၂.၂ ။ ၀ ယ်သူသည်သူ၏မမှန်ကန်သော (မတိကျသော) ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။
၃.၂.၃ ။ ရောင်းသူသည်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအပြင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပြဌာန်းထားသောအခြားအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၃.၁ ။ ၀ ယ်သူသည်ရောင်းသူအားအရောင်းအ ၀ ယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော၊ အပြည့်အဝနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်များအားလုံးကိုပေးရပါမည်။
၃.၃.၂ ။ ဝယ်သူသည်လက်ခံမှုမပြုလုပ်မီမှာကြားလွှာကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃.၃.၃ ။ ၀ ယ်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ကောက်ခံသည့်ငွေပမာဏနှင့်အညီလက်ခံခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၃.၃.၄ ။ ၀ ယ်သူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်အပါအ ၀ င်) နှင့် ၀ ယ်သူမှအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်သည့်အခါဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာရှိအသိပေးချက်များကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
၃.၃.၅ ။ ဝယ်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပြဌာန်းထားသောအခြားတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများလည်းရှိသည်။
၃.၄.၁ ။ ၀ ယ်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်မှသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီမှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလွှဲပြောင်းတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၄.၂ ။ ဝယ်သူသည်လက်ရှိဥပဒေနှင့်ဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အညီသူအားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၄.၃ ။ ၀ ယ်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းမှငြင်းဆန်ခြင်းအားအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပြprovided္ဌာန်းထားသည့်အကြောင်းပြချက်များရှိသည်။
၃.၄.၄ ။ ဝယ်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းများမှပြဌာန်းထားသောအခြားအခွင့်အရေးများကိုအသုံးပြုသည်။
၄.၁. ကောက်ချက်ချသောကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်အောက်ရှိကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းနှင့်အညီသတ်မှတ်သည်မှာယူသူသည်အမှာစာတင်သည့်နေ့တွင်တရားဝင်သည်၊ ၀ ယ်သူမှရွေးချယ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများ၏အမည်နှင့်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။
၄.၂ ကုန်သွယ်မှုငွေပမာဏအောက်ရှိကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းကို ၀ ယ်ယူသူသည် ၀ ယ်ယူသူရွေးချယ်သည့်အခြေအနေများနှင့်အညီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအနက်မှလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်သည်။
၅.၁ ၀ ယ်သူမှမှာကြားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံသူသည်ဝယ်သူ (သို့) ဝယ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့အမှာစာပေးပို့ချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ၀ ယ်သူကအတည်ပြုသူသည် ၀ ယ်သူကလက်ခံသူအဖြစ်ညွှန်ပြသူသည်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ၀ ယ်သူကအပြည့်အဝနှင့်သင့်လျော်စွာအခွင့်အာဏာရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်။
၅.၂ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြစ်သောကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းလိပ်စာ၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသူ၊ ပေးပို့သည့်အချိန် (အချိန်) သည် ၀ ယ်သူကအမှာစာတွင်ဖော်ပြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန်အနည်းဆုံးကာလကိုသက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ပြချက်တွင်ထင်ဟပ်သည်။
၅.၃ ။ ၀ ယ်သူသည်အမှာစာအားသွင်းသောအခါကုန်ပစ္စည်းလက်ခံသူ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တွင်ဖော်ပြသည့်အခါကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုန်ပစ္စည်း၏လက်ခံသူကပေးသောလိပ်စာသို့အရောက်ပို့ပေးသည်။
၅.၄ ၀ ယ်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ခြင်းဟုမယူမှတ်ဘဲကုန်ပစ္စည်းများကိုကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်ကောက်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၅.၅ ရောင်းချသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူပေးပို့ခွင့်ရှိသည်။
၅.၆ မြို့အတွင်းရှိကုန်စည်များအားအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။ မြို့ပြင်ရှိကုန်စည်များအားပို့ဆောင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသီးခြားကိစ္စတစ်ခုစီအတွက်ထပ်မံတွက်ချက်သည်။
၅.၇ ။ ကုန်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အခါလက်ခံသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်သူများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ထုပ်ပိုးမှု၏အပြင်ဘက် (စျေးကွက်) အသွင်အပြင်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သမာဓိရှိမှုကိုစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည် အရေအတွက်, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဌန်။
၅.၈ ကုန်ပစ္စည်းများကိုပေးပို့သည့်အခါလက်ခံသူသည်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူသည်ပေးပို့သည့်လိပ်စာသို့ရောက်ရှိချိန် မှစတင်၍ ၁၀ မိနစ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သောအဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အမိန့်အားမရသည့်အခါဝယ်သူ။
၅.၉ ။ ၀ ယ်သူသည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆိုခြင်းကိုကြေငြာပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အကြောင်းမှာကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်သူ၏အမိန့်ဖြင့်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်တစ် ဦး ချင်းသတ်မှတ်ထားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးသီးခြားဝယ်သူအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
၅.၁၀ ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံသူ (ဝယ်သူ) ၏အမှားကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါကရောင်းသူသည်အမှာစာတင်သောအခါသတ်မှတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းရှိသည့်လိပ်စာ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) တွင်ထားခဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဝယ်သူအားတောင်းဆိုခြင်းမတိုင်မီကုန်ပစ္စည်းများကို ၂၄ နာရီကြာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပြီးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရောင်းသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်၎င်းကုန်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုအောက်ရှိရောင်းသူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပေးချေထားသောရန်ပုံငွေများကိုပြန်မပေးပါ။
၅.၁၁ ၀ ယ်သူသည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ကြောင်းကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဝယ်သူကသက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုကိုရောင်းသူအားတင်ပြသည့်နေ့မှ ၁၀ ရက် (၁၀) ရက်ထက်နောက်မကျစေဘဲကုန်ပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်အမ်းရမည်။ ပြန်အမ်းငွေများသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပေးချေသည့်အခါအသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းတူသို့မဟုတ်ပါတီများကသဘောတူထားသောအခြားနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၅.၁၂ ဤအများပြည်သူကမ်းလှမ်းချက်ကိုရောင်းချသူသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုများဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ ၁၅ အရအရက်ထုတ်ကုန်များဝေးလံသောလက်လီရောင်းချခြင်းကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေအရတားမြစ်ထားပြီးရောင်းသူမှာမူရောင်းချခြင်းမပြုရဟု ၀ ယ်သူအားအကြောင်းကြားသည်။ လုပ်သည်။ ဆိုက်တွင်တင်ပြသောထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အချိုရည်များဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ပြခြင်းများကိုဖော်ပြသည့်ဖော်ပြချက်တွင် NON-ALCOHOLIC အချိုရည်များဖြင့်ပြီးဆုံးသည်။ NON-ALCOHOLIC အချိုရည်များရှိပုလင်းများ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်ပုံရိပ်များနှင့်ဖော်ပြသောသတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်။
၆.၁. ပါတီများကနိဂုံးချုပ်အပေးအယူအရ၎င်းတို့၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမလျော်ကန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်လျှင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေများနှင့်အညီအပြည့်အဝတာ ၀ န်ရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေမှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူကယူဆထားသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအခြားစွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်မီခြင်းသို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရောင်း ၀ ယ်သူသည်နိဂုံးချုပ်ထားသည့်ငွေပေးချေမှုအောက်တွင်တာဝန်ဝတ္တရားတန်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်တွင်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းခြွင်းချက်မရှိညွှန်ပြသောအခြေအနေများ၏ဖြစ်ပျက်မှု။
၆.၃ ရောင်းချသူသည်မသင့်လျော်သောစွမ်းဆောင်ရည် (သို့) ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုကိုပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ၀ ယ်သူသည်မိမိနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောအချက်အလက်များကိုပေးသောအခြေအနေများတွင်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းအခြေအနေကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၇.၁ ပါတီများအနေဖြင့်အင်အားကြီးမားမှုရှိသောအခြေအနေများကြောင့်ဤသဘောတူညီချက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံး ၀ ပျက်ကွက်မှုအတွက်တာ ၀ န်မှလွတ်မြောက်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ပြည်သူ့အာဏာပိုင်များမှလက်ခံခြင်းနှင့်ဤသဘောတူညီချက်အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်ပါတီများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သောအခြားအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
၇.၂ ။ အင်အားကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းအခြေအနေများတွင်ပါတီများအနေဖြင့်ဤသဘောတူစာချုပ်အရ၎င်းတို့၏တာ ၀ န်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သက်တမ်းသို့မဟုတ်ယင်းတို့၏အကျိုးဆက်များအတွက်ကာလကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးရက် ၃၀ (သုံးဆယ်) ရက်ထက်မပိုစေရ။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာမြင့်ပါကဤသဘောတူညီချက်အားထပ်မံသဘောတူညီချက်အရတရားဝင်ဖြစ်သောသဘောတူစာချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ပါတီများအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၈.၁ ဝယ်သူကဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံသည့်အခါဝယ်သူသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းမျဉ်းများအရသူနှင့်ရောင်းသူအကြားသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုထုတ်ပေးသည်။ အဖွဲ့ချုပ်
၈.၂ ။ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များရှိလျှင်ဝယ်သူကလက်ခံပြီးနောက်ကမ်းလှမ်းမှုသည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းပေါ် မူတည်၍ လက်ခံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။
၈.၂.၁ ။ ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရ - ကုန်ပစ္စည်းအားမှာယူခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
၈.၂.၂ ။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရဝယ်သူမှအမှာစာပေးခြင်းနှင့်ရောင်းသူ၏သက်ဆိုင်ရာတောင်းခံချက်အားအတည်ပြုခြင်းဖြင့်။
၈.၃ ။ ရောင်းသူသည် ၀ ယ်သူ၏ကမ်းလှမ်းချက်လက်ခံမှုကိုလက်ခံရရှိချိန်မှ စ၍ ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူအကြားအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
၈.၄ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ရောင်းသူနှင့်ရောင်းသူနှင့်အတူအကန့်အသတ်မရှိအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
၉.၁ ။ ကမ်းလှမ်းချက်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်မှ စတင်၍ အာဏာသက်ရောက်ပြီး၎င်းရောင်းချသူသည်အဆိုပါကမ်းလှမ်းချက်ကိုရောင်းချသူမှရုပ်သိမ်းသည့်နေ့နှင့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။
၉.၂ ။ ရောင်းချသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုတစ်ဖက်သတ်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ၀ ယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့် (သို့) ၀ ယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ခြင်းအားဖြင့် ၀ ယ်သူအားရွေးချယ်သူအနေဖြင့်ရောင်းသူ၏ရွေးချယ်မှုအရ ၀ ယ်သူသို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူ၏အီးမေး (သို့) စာတိုက်လိပ်စာသို့ပို့ခြင်းဖြင့်ပေးပို့သည်။ သဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ်အဖြစ်နှင့်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကာလအတွင်း ... အဆုံးစွန်သော
၉.၃ ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုမိတ်ဆက်ခြင်းမှအပအခြားပြောင်းလဲမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းချက်တွင်သို့မဟုတ်ပေးပို့ထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျတွင်မဖော်ပြပါက ၀ ယ်သူကိုအကြောင်းကြားသည့်နေ့စွဲနှင့် အချိန်မှစ၍ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
၉.၄ ။ ထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုတွင်ထင်ဟပ်စေသည့်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ၀ ယ်သူကသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးရောင်းသူ၏သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့်ရောင်းသူ၏အာရုံကိုယူဆောင်လာသည်။
၁၀.၁ ။ အဆိုပါသဘောတူစာချုပ်သည် ၀ ယ်သူ၏ ၀ ယ်သူ၏လက်ခံမှုကိုလက်ခံသည့်နေ့နှင့်အချိန်မှ စတင်၍ သက်ဆိုင်သူများသည်၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုမဖြည့်ဆည်းမှီတိုင်အောင်ဖြစ်စေ၊
၁၁.၂ ။ သဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းအတွင်းကမ်းလှမ်းမှုအားအေးဂျင့်မှရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်သဘောတူညီချက်သည်သက်ဆိုင်ရာမဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေသည့်ကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
၁၀.၃ ။ အဆိုပါငွေပေးငွေယူသည်ပါတီများ၏သဘောတူညီချက်နှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းမှပေးသည့်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ရပ်စဲနိုင်သည်။
၁၂.၁ ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုစီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပါ ၀ င်မှုများကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိကြသည်။ ထို့အပြင်ဤသဘောတူညီချက် (နောက်ပိုင်းတွင်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်) ကိုလျှို့ဝှက်။ လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ထားရန်။ ထုတ်ဝြေဖန့်ချိခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုပါတီများအားကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲတတိယပါတီများသို့ပေးပို့ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
၁၂.၂ ။ ပါတီတစ်ခုချင်းစီသည်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုတူညီသောဂရုစိုက်မှုနှင့်အတိုင်းအတာဖြင့်ဤလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါကကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမီမှုအားပါတီတစ်ခုစီမှ ၀ န်ထမ်းများမှသာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီးသဘောတူညီချက်ကိုပြည့်စုံစေရန်အတွက်၎င်းတို့၏တာ ၀ န်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ပါတီမှတစ်ခုချင်းစီသည် ၀ န်ထမ်းများအားဤကမ်းလှမ်းချက်အားဖြင့်ပါတီများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်လိုအပ်သောအလားတူအစီအမံများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
၁၁.၃ ။ ၀ ယ်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါက ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ရောင်းသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်အညီပြုလုပ်သည်။
၁၁.၄ ။ ရောင်းသူသည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များထပ်မံတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာ - မိတ္တူကူးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိုအပ်ပါကခရက်ဒစ်ကတ်သည် ၀ ယ်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုများကိုတားဆီးရန်။ ရောင်းသူအားဤအပိုဆောင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ပါက၎င်း၏ကာကွယ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုအပိုဒ် ၁၂.၃ နှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်များ
၁၂.၅ ။ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများသည်သဘောတူစာချုပ်များ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကန့်သတ်ချက်များမှ လွဲ၍ အခြားအကြောင်းအရာများ မှလွဲ၍ အခြားသဘောတူညီမှုများမှအပအခြားသဘောတူညီချက်မပါရှိပါကသဘောတူညီမှုသက်တမ်းအတွင်းနှင့်သဘောတူညီချက်အားရပ်စဲခြင်း (ရပ်စဲသည့်) ရက်မှနောက် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်းသက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
12. လက်ရေးလက်မှတ်၏ analogue အပေါ်သဘောတူညီချက်
၁၃.၁ ။ သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အခါစာချုပ်အရအသိပေးချက်များပေးပို့ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ပါ ၀ င်သူများကလက်မှတ်၏ဖက်စ်ဖြင့်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၁၃.၂ ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်စဉ်ကာလအတွင်းဖက်စ် (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများဖလှယ်ခွင့်ပြုသည်ကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ကူးယူထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများသည်တရား ၀ င်အင်အားအပြည့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံသူထံပေးပို့သည့်အတည်ပြုချက်ရှိလျှင်
၁၃.၃ ။ အကယ်၍ ပါတီများကအီးမေးလ်ကိုသုံးလျှင်၎င်း၏အကူအညီဖြင့်ပေးပို့သောစာရွက်စာတမ်းအားပေးပို့သူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုးအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
၁၃.၄ ။ အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပို့ရန်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်စာရွက်စာတမ်းလက်ခံရရှိသူသည်သူအသုံးပြုသောအီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးသူကိုဆုံးဖြတ်သည်။
၁၃.၅ ။ ၀ ယ်သူသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လိုအပ်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအတည်ပြုပြီးသောသဘောတူညီချက်ကိုရောင်းချသောအခါပါတီများမှရိုးရိုးရှင်းရှင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမှတ်ပုံတင်နေစဉ်အတွင်းရောင်းသူမှပြုလုပ်သောအသုံးပြုသူဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်။
၁၃.၆ ။ ပါတီများ၏အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အရရိုးရိုးအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ညီမျှသောစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးသည်။
၁၃.၇ ။ သက်ဆိုင်ရာပါတီ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကို အသုံးပြု၍ ပါတီများအကြားဆက်ဆံမှုပြုစဉ်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုထိုပါတီမှကျူးလွန်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။
၁၂.၈ ။ ပါတီများအနေဖြင့်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သော့၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရောင်းသူသည်မိမိ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအချက်အလက်များကို (login နှင့်စကားဝှက်) လွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သူ၏အီးမေးလ်ကိုတတိယပါတီများသို့ပေးပို့ခွင့်မရှိပါ။ ရောင်းချသူသည်သူတို့၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုမှုအတွက်နည်းလမ်းများကိုလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့သိုလှောင်မှု၏အဖြစ်သူတို့ကိုလက်လှမ်းကန့်သတ်။
၁၃.၉ ။ ရောင်းသူ၏ login နှင့်စကားဝှက်အားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီများသို့ဆုံးရှုံးခြင်း (ထုတ်ဖော်ခြင်း) ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ရောင်းချသူမှဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအီးမေးလ်လိပ်စာမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်အကြောင်းကြားသည်။
၁၃.၁၀ ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိရောင်းသူမှဖော်ပြသောအီးမေးလ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ရောင်းသူသည်လိပ်စာအသစ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာကိုချက်ချင်းအစားထိုးရန်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်လိပ်စာအသစ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါလိပ်စာအသစ်မှအီးမေးလ်။ အီးမေးလ်
၁၃.၁ ။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်, ၎င်း၏နိဂုံးချုပ်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်ကွပ်မျက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေပြဌာန်းခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်အားဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (အပြည့်အဝမပြည့်စုံသေးသော) ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသောကိစ္စရပ်များအားလုံးသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။
၁၄.၂ ။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်နှင့် / သို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်အောက်မှာသက်ဆိုင်တဲ့အငြင်းပွားမှုများတောင်းဆိုမှုအက္ခရာများလဲလှယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြု။ ဖြေရှင်းနေကြသည်။ ပါတီများအကြားသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ပါကပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုကို Agent ၏တည်နေရာရှိတရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းသည်။
၁၃.၃ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီငွေသွင်းငွေထုတ်ခြင်းနိဂုံးချုပ်ချိန် မှစ၍ ပါတီများအကြားစာဖြင့်ရေးသားထားသော (နှုတ်ဖြင့်) သဘောတူညီချက်များသို့မဟုတ်ငွေသွင်းငွေထုတ်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်များသည်သူတို့၏တရား ၀ င်အင်အားကိုဆုံးရှုံးသည်။
၁၃.၄ ဝယ်သူသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သူသည်မိမိဆန္ဒနှင့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာပြုမူဆောင်ရွက်ရန်အာမခံသည်။ ရောင်းသူနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဝယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနည်းလမ်းအားလုံးတွက်ချက်ရန်အကန့်အသတ်မရှိ၊ စုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စနစ်တကျစုဆောင်းခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်းအပါအ ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုများ (စစ်ဆင်ရေးများ) အားလုံးကဲ့သို့အလိုအလျောက်နည်းလမ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများ (စစ်ဆင်ရေးများ) အပါအ ၀ င်၊ ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုကိုနိဂုံးချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ဒေတာ) ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း (ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်း)၊
၁၃.၅ ။ ကမ်းလှမ်းချက်တွင်မဖော်ပြထားပါကသဘောတူညီချက်ပါအသိပေးချက်များ၊ စာများ၊ စာများအားလုံးကိုပါတီတစ်ခုကအခြားပါတီသို့အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည် - ၁) အီးမေးလ်ဖြင့် - က) အီးမေးလ်လိပ်စာမှ ရောင်းချသူ LLC FLN သည်ဝယ်သူ၏အမှာစာအားဝယ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောဝယ်သူ၏အီးမေးလိပ်စာသို့၎င်း၊ သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်လည်းကောင်း၊ ခ) ပုဒ်မ ၁၄ တွင်ဖော်ပြထားသောရောင်းသူ၏အီးမေးလိပ်စာသို့ကမ်းလှမ်းမှု၏အပိုင်း ၁၄ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အမှာစာသို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ထဲတွင်ဝယ်သူကသတ်မှတ်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာမှကမ်းလှမ်း; ၂) ၀ ယ်သူအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်မှအီလက်ထရောနစ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်း။ ၃) လက်ခံရရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုစာဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာဖြင့်ဖြစ်စေစာပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လိပ်စာသို့ပို့သူအားပေးပို့ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။
၁၄.၄ ။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်ဤကမ်းလှမ်းချက် / သဘောတူညီချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပြprovision္ဌာန်းချက်များသည်မမှန်ကန်တဲ့၊ အတည်မပြုနိုင်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်လျှင်ထိုမမှန်ကန်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကမ်းလှမ်းချက် / သဘောတူညီချက်၏ပြpart္ဌာန်းချက်များ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏တရားဝင်မှုကိုမထိခိုက်ပါ။
၁၃.၇ ။ နှစ်ဖက်သဘောတူညီသောစာချုပ်စာတမ်းများဖြင့်စာချုပ်စာတမ်းများကိုစာချုပ်စာတမ်းများဖြင့်ထုတ်ဝြေဖန့်ချိသောသဘောတူညီချက်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများ၏ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ပြီးစီးခဲ့အမိန့်တွင်ထင်ဟပ်အဖြစ်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု။
အဆိုပါအေးဂျင့်၏ 14 အသေးစိတ်
အမည် - တာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီ "FLN"